Ukuqhekeka kwe-Yahoo kuthinte wonke ama-akhawunti womsebenzisi | Izindaba zamagajethi
Ukuqhekeka kwe-Yahoo kuthinte wonke ama-akhawunti abo omsebenzisi
I-Yahoo ayiyeki ukuqamba amanga, futhi uma kungenjalo, okungenani umbono eniwunikayo maqondana namaphutha ezokuphepha.
Ngo-2013, i-Yahoo yahlaselwa lapho wonke ama-akhawunti womsebenzisi ayizigidi eziyizinkulungwane ezintathu avele obala Kodwa-ke, lolu lwazi seludaluliwe manje ngoba ngaphambili, futhi eminyakeni emithathu kuphela ngemuva kwalokhu okwenzekile, isibalo esinikeziwe besiphansi kakhulu.
Akekho ophunyukile ekugencweni yi-Yahoo
Ukwephulwa kwedatha okukhulu okwahlupheka uYahoo ngo-Agasti 2013 kuthinte ama-akhawunti abasebenzisi abayizigidi eziyizinkulungwane ezintathu enkampani ayesebenza ngaleso sikhathi. Nakhu ukuthi ukukhishwa kwezindaba esanda kukhishwa yinkampani iVerizon, inkampani yabazali bakaYahoo selokhu yaqala ukusebenza ekuqaleni konyaka. Noma kunjalo, iqiniso yilokho inani labathintekile belilokhu landa ngokuhamba kwesikhathi lize lifinyelele esiphelele.
Lapho le nkinga iqala ukuvela, futhi kuze kwaba seminyakeni emithathu ngemuva kwemicimbi, ngonyaka we-2016, izibalo zokuqala zakhuluma ngama-akhawunti athintekayo ayizigidi ezingama-500. Ngokushesha ngemuva kwalokho, uYahoo wathi ukugqekeza kuthinte ama-akhawunti ayi-1.000 billion, okungukuthi, ingxenye yesithathu yenani lama-akhawunti akhona ngaleso sikhathi. Futhi manje, eminyakeni engaphezu kwemine ngemuva komcimbi, yiVerizon eqinisekisa ukuthi, ngenxa yobuchwepheshe obusha obutholakalayo nomsebenzi wokuphenya owenziwe "ngosizo lochwepheshe bangaphandle bezomthetho" lokhu kuhlasela kwakukubi kakhulu njengoba kuthinta wonke ama-akhawunti we-Yahoo ngo-2013.
Khumbula ukuthi imininingwane eveziwe yayiqukethe amagama, amakheli e-imeyili, izinombolo zocingo, izinsuku zokuzalwa, amaphasiwedi kanye nemibuzo nezokuphepha zombili zibethelwe futhi azibhalwanga. Mayelana nemininingwane efana nama-akhawunti asebhange noma imininingwane kumakhadi esikweletu kanye / noma asebhange, akukacaci ngokuphelele ukuthi adalulwa noma cha.
Khonamanjalo, uVerizon uthi iqembu lakwaYahoo liyaqhubeka nokuthatha izinyathelo ezibalulekile ukwenza ngcono ezokuphepha. Ungathemba kanjani!?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » Ukuqhekeka kwe-Yahoo kuthinte wonke ama-akhawunti abo omsebenzisi
Isithombe salokho okungaba yiloli kagesi kaTesla sishicilelwe